घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो
एलबी पूर्ण कहानी को एक फुटबल मिडफील्ड मास्टो प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम निकनाम 'Cescy'। हाम्रो Cesc Fabregas बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बोल्ड जीवनी तथ्य तपाईले उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा विवरण को उनको बचपन समय सम्म सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा फेम, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ र पिचलाई उनको बारेमा केही तथ्यहरू चिन्नु अघि जीवन कथा समावेश गर्दछ। सुरु गरौं;
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -प्रारम्भिक बचपन
फ्रान्सेस्को "सीसेक" फ्राग्रेज सोलर मई 4, 1987 मा जन्मेको थियो,
Cesc Fabregas प्रारम्भिक बचपन दिन
स्पैनिश पोर्ट अरेनिस डे मा शहरमा। उनी एक मामूली पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। उनको आमा, नूरियाले एक समयका लागि खानपानको रूपमा काम गरिसकेपछि उनले पछि उनको पेस्ट्री कम्पनीको स्वामित्व लिइन्। उनको पिता फ्रान्सेस्को फ्राग्रेगस श्रीमतीले आफ्नो परिवारलाई एक कम्पनीको स्वामित्व लिनु पहिले एक निर्माण कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्न लगाए।
उहाँ टाढास राशिफल चिन्हको साथ सेतो जातीय क्यालोराडो पृष्ठभूमिमा पर्नुहुन्छ। आफ्नो युवा दिनहरुमा केसेफ फेबरेस एक पड़ोसी मा रहयो जहां बुडफाइटिंग र मशरूम शिकार दिन को आदेश थियो। उनी आमाबाबुको तलाकले गर्दा निराशाजनक किशोर जीवन बिताउँथे। यो तपाईंले उनलाई फुटबलिंग विश्व क्लास स्टार बनाउनदेखि रोक्न सक्नुहुन्न।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -पारिवारिक जीवन
Cesc Fabregas र पिता (फ्रान्सेस्को Fàregregas एसआर)
तिनको बुबा, फ्रान्सेस् फ्याब्रेग्रेस श्रीमती सुपर अमीर प्रकार थिएनन्। उहाँले जीवनलाई एक अकुशल निर्माण कार्यकर्ताको रूपमा सुरु गर्नुभयो जसले आजको आधुनिक क्यालोलोनियाको भौतिक निर्माणमा बार्सिलोना भनिन्छ। ऊ सधैँ पहिलो व्यक्ति निर्माणमा एक उपकरणबाकस तोड्न पहिलो व्यक्ति थियो जुन उनले पैसा कमाएका थिए परिवारको हेरचाह र सानो फ्याबरेगलाई फुटबल अकादमीमा पठाउँछन्। भर्खरै साक्षात्कारमा, फ्रान्सेस्को फ्रान्सग्रास एसआरले जीवनको प्रारम्भिक सुरुवातबारे धेरै उल्लेख गरे। तिनका शब्दहरूमा ...।'एक अकुशल कामदारको रूपमा, मैले सबै काम गरेर जीवन सुरू गरे तापनि तिनीहरू सरल लोडिङ र उचाईबाट अनियमित कामकाजी परिस्थितिहरूसँग चुनौतीपूर्ण हाइट्स गर्न सक्छन्, वा खतरनाक सामग्रीको सामना गर्दा निर्माण कार्यकर्ताको रूपमा, मलाई केहिको लागि तैयार गरिएको थियो! त्यसो त मैले आफ्नो फुटबल अकादमीमा मेरो छोराको शुल्क तिर्न सक्दिन र मेरो परिवारलाई तिर्न सक्दिन। मैले निश्चित गरे कि मेरो छोरा मेरो जस्तै समाप्त छैन।
फ्रान्ससेस्को फ्रान्सग्रास एसआर हालले आफ्नो सम्पत्ति कम्पनीहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने, सबै स्टार्टअपको लागि रकम प्रदान गर्नका लागि आफ्ना छोरा सिसेफ फेब्रेसालाई धन्यवाद। तथापि, यो नोट गर्न उल्लेखनीय छ कि फुटबल पनि उनको फ्रान्सेस्को फ्रान्सग्रास एसआरको जीवनको ठूलो भाग थियो। उनले एकपटक उनको छोरा जन्मेपछि फुटबल खेलिन्, र जब यो मैदान फर्काउन युवा फेब्रेअसको लागि समय आयो, यो उनको बुबा थियो जसले आफ्नो पहिलो कोचको रूपमा सेवा गरे।
Cesc Fabregas र मातृ (नोरिया सोलर)।
उनको पिताले आफ्नो निर्माण कार्यको सामना गरिसकेपछि, उनको आमा, नूरिया सोलरले लामो समयको लागि एफसी बार्सिलोना स्टेडियमको लागि खानपानको रूपमा काम गरे। उनले क्याम्प नाउमा सबै भन्दा उत्कृष्ट थिए जुन फुटबलका फ्यानहरूका लागि डिलिवरी, तयारी र प्रस्तुतिको व्यवस्था गर्दछ।
यो उनको छोरा सीसेक थियो, परिवारको रोटी विजेता जसले उनको पास्ता कम्पनीको मालिकलाई खानपान लाइन छोड्ने सपना देख्यो। आज, उनको बार्सिलोना आधारित पेस्ट्री कम्पनीले आटा, चीनी, दूध, मक्खन, छोटो, पाक पाउडर, र अण्डा जस्ता सामग्रीबाट बनाइएको सबै प्रकारको पकाएका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ।
नूरिया सोलरले आफ्नो छोरालाई कोरमा प्रेम गर्दछ। दुवै अझै पनि बेवास्ता छ। भर्खरै साक्षात्कारमा, उनले एक पटक भन्नुभयो।
'हुन सक्छ, भाग्य र भाग्यले मलाई सिसेको र उनको बुबा भन्दा पनि एक अमीर आमाबाबुलाई सिसेक दिन सक्छ। तर केहि पनि छैन, हामीलाई भन्दा भन्दा राम्रो छोरालाई दिन सक्छ। हामी आफ्नो छोरालाई माया गर्छौं, उहाँ हाम्रो जीवनमा भएको सबै भन्दा राम्रो चीज हो। ' सुशर सोलर उनको पति देखि अलग छ र नयाँ साझेदार संग रहछन।
Cesc Fabregas मा एक सानो बहन नाम कार्लोटा फ्यागरेस छ। तिनीहरू दुवै असल साथी हुन्।
Cesc Fabregas र बहिनी (कार्लोटा Fabregas)
उनले आफ्नी आमा, नूरिया सोलर र दुवै व्यवस्थित पेस्ट्री कम्पनीसँग फ्रान्ससेस्को फेब्रेग्रा एसआर संग तलाक पछि बसे।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -संसारमा सबैभन्दा सुन्दर फुटबलको लागि शब्द
पहिलो, यो विश्वास गर्न योग्य छ कि Cesc धेरै सुन्दर छ र एक आकर्षक व्यक्तित्व छ। हे, एक केटाको रूपमा उनले सबै केटीहरूलाई आकर्षित गर्दैनन्। त्यसपछि उहाँ पतला हुनुहुन्थ्यो र उहाँका गाई हड्डीहरूले उनलाई सही सुन्दर नजर दिएनन्। उहाँ आफ्ना बिसनहरूमा धेरै जवान महिला प्रशंसकहरूको स्वर्गीय सपना बन्नुभयो।
आज, उनको गाल एक पतला नक्कली मिशेलान्जी मूर्ति जस्तै चिनी छ। उहाँको नाक पूर्णरूपमा सममित छ। उहाँका ओठहरू सुन्दर बनाइएका छन्: दैलोमा एक प्यारा सानो स्किर्कको अन्तमा। सूर्यका किरणहरूले गाल र चिनमा घिमिरेहरूलाई हाइलाइट गर्दछ।
संसारमा सबैभन्दा सुन्दर फुटबलको लागि प्रतियोगी
उहाँका ओठहरू मीठा जामुन जस्तै हुन्छन्, र उनको कोलोनी आधी रातको चन्द्रमा जस्तो बलियो छ। उहाँका आँखाहरू उज्ज्वल र साहसी छन्। उनको फ्रेम धेरै फर्म र पूर्ण रूपमा आफ्नो पछाडिको कटौती पसीना भाग को specales को रूप मा फिट छ। तिनको कपाल गहिरो लहरहरु जस्तो छ जुन हरेक केटी मा मासु मानेन। सानो आश्चर्य धेरै महिलाहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन् कि उनको स्पर्श नरम र सज्जन, बलियो र मोहनशील हुनेछ।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -किशोर प्रेम जीवन
Cesc Fabregas र उनको पूर्व प्रेमिका कार्ला गार्सियालाई उनीहरूको देशी स्पेनमा किशोर किशोरीको रूपमा प्रेममा पसे। तिनीहरू एक जोडे भए जब 16-वर्षीय Cesc बार्सिलोना देखि आर्सेसन द्वारा हस्ताक्षर गरियो।
Cesc Fabregas बचपन गर्लफ्रेंड (कार्ला गार्सिया)
तिनीहरू सात वर्षको लागि सँगै बस्थे र उनीहरूलाई रोमांटिक विवाहको आशा गर्थे। यद्यपि, फुटबल स्टार अप्रिल 29, 2011 मा गार्सिया संग विभाजित भएको थियो।
Cesc Fabregas र कार्ला Garcia (उनको पहिलो प्रेम)
रिपोर्ट अनुसार, जोडीले अलग भयो त्यसैले Cesc उनको साथ तोड्न निर्णय गरे। तर, यो स्पष्ट छ कि फेबरेसको जीवनमा सिमानको उपस्थिति उनको अघिल्लो सम्बन्धको अन्त्यको कारण थियो वा होइन, तर फेब्रिगेसनको बुबाले स्वीकार गर्यो कि "कार्ला" भन्दा बढी उनको निर्णय थियो। उहाँले पनि भन्नुभयो "" यो शर्म हो। तिनीहरू लामो समयसम्म सँगसँगै थिए र उनी एक सुन्दर केटी हुन्। "
Cesc Fabregas 'पछिल्ला प्रेमिका डेनीला सामेन एक लाखपति को पहिले पत्नी को रूप मा जानिन्छ, जो किन्सनिंगटन र चेल्सी मा आफ्नो उत्कृष्ट, लक्जरी र मिलियनियर गुणहरुको लागि जानिन्छ। उनीहरूको विवाहको समयमा, दम्पती दुई छोराछोरी छन्, एक 11-वर्षकी केटी र एक9वर्षीय छोरा।
सेसेकको नजिकका साथीहरूले पत्ता लगाए कि सीसेफ फ्यार्ग्रेज हालै खुसीसाथ र धेरै रमाइलो देखिन्छ। फुटबल खेलाडीले पनि "बायाँ" को बायाँ हातमा अक्षरको साथ एक ताराको रूपमा नयाँ ट्याटू राखेको थियो। धेरै अरबी शब्दहरूसँग सम्बद्ध, यो प्रकट भएको थियो कि अर्थ मेरो जीवन डी सधैंभर थियो।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -लाइट स्टोरीको सेसेफ फ्याबरेस र ड्यानिला सेम्यानमा एक अन्तरदृष्टि
संसारका सबै अविवाहित महिला विवाहितहरूमध्ये, सिस्से फेब्रेगाको हृदय केवल एक महिलाको लागि गिर्यो जसले हरेक कुरालाई प्रेमको खातिर विवाह गर्न थाले। उनी लेबनानी जन्मेको छैन 'डेनीला सिमानन '।
कसरी डेनसेल सिमानन सेसेफ फेबरेसको जीवनमा आयो
उनी प्रायः महिलाको रुपमा ट्याग गरिएको छ जसले पहिले आर्सेल्यान्ड स्टार फेबरेजलाई मंगलबार पाउन्ड तलाकका युद्धमा केन्द्रित पारेको छ। उनले पूर्व शस्त्रागार मानिससँग बसोबास गर्न आफ्नो पूर्व पति जो एक सम्पत्ति अरबपतिको विवाह गरे।
एले Taktouk निराशा Fabregas र पूर्व पत्नी संग
सम्पत्ति को लागी अरबपति को अनुसारएली Taktouk '
"हर्षित भएको बेला बेलायतका कानुनी कानूनहरू त्यस्ता हुन् कि अदालतले मानिसको घर चोरीदिन्छन् र यसलाई व्यभिचारी पतिलाई दिइनेछ जसले आफ्ना प्रेमीसँग बाँच्न सक्दछ जसले उसलाई अप्ठ्यारो पार्छ"? एले Taktouk बुझाउँछ।
जसमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यहाँ दुई हतियारहरू छन् भने कसरी आर्सेलियन फुटबलर सीसेफ फेबरेसले उनको ग्लैमरस प्रेमिका ड्यानेले सेमनलाई भेट्टाए।
घटनाक्रमको उनको खाताले उनीहरूको संख्यामा बदलिदिएको बेला लन्डनको जापानी रेस्टुरेन्टमा उनीहरूको फुटबल-पागल पुत्रको लागि सोध्नको लागि उनीहरूको पूर्व पतिको लागि उनीहरूको अटोग्राफ सोध्थे। अटोग्राग प्राप्त गरे पछि, रिपोर्टले संकेत गरेको छ कि भव्य मिस सिमानन हिप-रेष्टुरेन्टले भरिएको रेस्टुरेन्टको टुक्रालाई छोडिदिनु अघि पेपरमा राखिएको थियो, जसमा उनको मोबाइल नम्बरलाई प्लेयरको तालिकामा लेखिएको थियो।
पहिलो स्याङ्किङ्ग 38 वर्षकी श्री ताकुकुकले काम गरेको थियो जब उनले जून 2011 मा बिहान बिहानको समाचार खोल्यो, उनको आफ्नी श्रीमती, जो 38 पनि हो, उनीहरुलाई छुट्टीमा स्पेनमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संग एक सूर्यको साथ साझा गर्दै स्वागत गरे। फ्रान्सको दक्षिणमा राम्रो।
अनि बिकिनी-क्लाद 'रहस्य श्याम'ले गर्दा सबै विदेशी प्रसिद्ध फुटबलरमा केही विदेशी चिहानमा लुगा लगाएर आफ्नो नाश्ता बन्द गर्न केहि चीजहरू सम्भव छ।
श्री Taktouk ले व्यभिचार नगरेको छैन - सार्वजनिक रूपमा तल झरेको छ। यो हप्ता, उहाँले 25-वर्ष-उमेर Fabregas आफ्नो 13 वर्षको विवाहको आय भन्दा माथि आफ्नो पूर्व पत्नी संग चलिरहेको (र धेरै गन्दा) कानूनी युद्धमा घुसाउनुभयो।
लन्डनमा अपील सुटिङको अदालतमा, उनले फुटबलमा उनको तलाक जीवन शैली निषेध नगरेको दाबी गरेपछि मिस स्माननले आफ्नो तलाकको मामलामा गत महिना जेल सजाय गरेको आरोप लगाए।
यसका लागि उनीहरूले यसका बारेमा जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले यसका बारेमा जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले यसका बारेमा जानकारी दिएका छन्। यसअघि उनीहरूले यसका बारेमा जानकारी गराएका थिए। । उनी अचम्म छ कि बजारमा ग्रेड II-सूचीबद्ध अपार्टमेन्ट राख्ने तीन हप्ता भित्र, उनले बार्सिलोनामा आधारित व्यवसायबाट यसको लागि £ £7मिलियन बोली पायो - यसले फिबरेजको कम्पनीलाई ट्रांसफर गर्यो।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -सुन्दर परिवार फोटोहरू
फेबरेजसँग पहिले नै दुई-वर्षकी छोरी, लिआ हो, उनको सुन्दर साथी सिमानासँग। तल सुन्दर परिवारको प्यारा फोटोहरू छन्।
Cesc Fabregas को सुन्दर परिवार
केसेक र परिवार नजिकैको ढोका फोटो शटमा।
Cesc Fabregas र केटी मित्र हट्छ
आउटडोर फोटो शटमा सेसेक फेबरेज र परिवार।
केटी मित्रसँग प्रिमियर लीग ट्राफिक मनाउने।
सेस्सी फेबरेज र परिवार चेल्सीको प्रिमियर लीग शीर्षक मनाउने।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -आफ्नो दोस्रो बच्चा 'कैप्री फेब्रेगस' को जन्म दिन
क्षेत्रीय चीजहरू 2015 मा आफ्नो दोस्रो बच्चा जन्माए पछि फेबरेजका लागि राम्रो भइरहेको छ। उनले आफ्नो पिता फेरि फेरि बन्न सक्दैनन्, फेसबुकमा आत्मविश्वास पोस्ट गर्नाले आफ्नी प्रेमिका ड्यानिला सेमेन र नवजात शिशुको साथ डेलिभरी रूमबाट।
Cesc Fabregas आफ्नो छोरीको जन्म साक्षी।
फेबरेजसँग पहिले नै दुई-वर्षकी छोरी, लिआको लामो समयको साथी सेमानन भएको छ।
आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा मिडियाफिल्डरले यो समाचार घोषणा गरे: 'एक पटक फेरि बुबा। म प्रमोडर हुन सकेन, तपाईलाई अर्को स्वर्गदूतलाई परिवारमा ल्याउन र धेरै साहसी हुन को लागी @daniellasemaan7 धन्यवाद। #CapriFabregasSemaan
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -एक टूटेको घरको उत्पादन
10 मा Cesc Fabregasa: एक टूटा घर को एक उत्पाद
Cesc Fabregas आमाबाबुको ब्रेक-अपले 10 वर्षको निविदा उमेरमा उनलाई कडा मेहनत गर्छ। तर पीडा गार्डियोलाको हस्तक्षेपले कता कता कता कता कता कता कता कतालान क्लब (एफसी बार्सिलोना) को कप्तान थियो। उहाँ एक खेलाडी हुनुहुन्थ्यो जब उमेर बढ्दै गर्दा सीसेकलाई मूर्ति दिइयो। पेप Guardiola ले उनलाई दुर्व्यवहार गरे। उनी फ्यागरेगका लागि एउटा शर्टमा हस्ताक्षर गरीन् र यो सन्देश थियो: "एक दिन, तपाईं बाराको नम्बर चार हुनुहुनेछ"। यो सपना वास्तविकतामा आयो।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो -प्रारम्भिक फुटबल क्यारियर
फ्याग्रेगले समर्थन गरेको छ एफसी बार्सिलोना बचपनबाट र उनीहरूको दाजुभाइसँग नौ महिनाको हुँदा उनीहरूको पहिलो म्याचमा गए। उनले आफ्नो क्लब फुटबल क्यारियर सुरू गरे CE Mataróबार्सिलोनाको लागि साइन इन गर्नु अघि ला Masia जवान अकादमी 10 मा 1997 उमेर।
Cesc Fabregas प्रारम्भिक फुटबल क्यारियर
उनको पहिलो कोच, सेन ब्लैई, ले भन्यो कि उनको स्काउट्सबाट लुकाउन को लागी बार्सिलोना विरुद्ध बार्सिलोनाको लागि फ्याग्रेग्स चयन गरेन। तथापि, बार्सिलोना लामो समयको लागि बार्सिलोना सामना गर्न असक्षम थियो, र माटरोले दिए र फेब्रेग्रालाई हरेक हप्ता बार्सिलोनासँग एक दिन प्रशिक्षित गर्न अनुमति दिए। अन्ततः फेब्रेगस बार्सिलोनाको अकादमी पूर्ण समयमा सामेल हुनुभयो। उहाँको प्रारम्भिक प्रशिक्षण एक थियो रक्षात्मक मिडफिल्डर उल्लेखनीय नामहरू जस्तै साथ खेल्दै जस्तै Gerard Piqué र लिओनेल मेस्सी। यद्यपि उनी एक प्रख्यात स्केलर थिए, कहिलेकाहिँ क्लबको जवान टोलीका लागि एक सिजनमा 30 गोल भन्दा बढी बढी स्कोर गर्दै। उनले पहिलो टोलीको खेल खेल्न सकेन क्याम्प नो.
प्रारम्भिक उमेरबाट, फेब्रेगले खेललाई मानसिक कठोरता र समर्पण देखाउनुभयो जसले उनलाई साँचो प्रोफेसरको रूपमा अलग गर्यो। 8 को उमेर मा, उनको दिमाग मा पेशेवर को रूप मा धेरै धेरै खेलन को सपनाहरु संग, फेब्रेग पहिले देखि नै कडा मेहनत र उनको आहार को बारे मा सावधान रहन को लागि, फास्ट फूड मा माछा र सब्जिहरु को लागि चुनौति। 10 उमेरमा, उनी फुटबल क्लब एफसी बार्सिलोनाको जवान अकादमीमा खेल्थे, खेलकुदको सबैभन्दा आशायोग्य युवा खेलाडीका केही लागि एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण मैदान।
2003 को गर्मीहरु मा, फेब्रेगसले फीफा U-17 विश्व च्याम्पियनसिपमा फिनल्याण्डमा आफ्नो प्रभावशाली प्रतिभा देखाउनुभयो, जहाँ खेलाडीले स्पेनलाई दोस्रो-स्थानमा समापन गर्यो, गोल्डन बलको टूर्नामेंटको सबैभन्दा राम्रो खेलाडीको रूपमा लिईयो र गोल्डन बुट अवार्ड प्राप्त गर्यो। टूर्नामेंटको उच्च स्कोरर बनेको छ।
फ्याग्रेगाका लागि, घर छोड्ने र इङ्गल्याण्डमा जम्प गर्ने निर्णय एक ठूलो थियो। फीफा U-17 केहि महिना पछि, फेब्रेगले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा प्रिमियर लीग क्लब आर्सेनल संग हस्ताक्षर गरे। बाँकी इतिहास हो।